Rotaka tao Barikadimy – Toamasina: mpianatra iray maty voatifitra, 8 voasambotra | NewsMada
Nirefodrefotra indray ny basy sy ny grenady lakrimozena, tao Toamasina, omaly, noho ny fihetsiketsehan’ny mpianatry ny oniversite Barikadimy nitaky ny vatsim-pianarana. Vokatr’izany fifanjevoana izany, mpianatra iray maty, valo voasambotra ary dimy naratra, ka mpitandro filaminana ny telo.
Io indray! Raikitra ny savorovoro notarihin’ny mpianatra tao amin’ny oniversiten’i Toamasina, omaly. Mpianatra iray, taona faharoa no maty voatifitry ny mpitandro filaminana nandritra ny fifandonana teo amin’ny roa tonta. Vao mangiran-dratsy, nikononkonona hanao fitakiana ny vatsim-pianarany efa-bolana izay tsy mbola voaloha ireo mpianatra ireo. Hisorohana ny korontana, tonga teo ivelan’ny faritry ny fianarana ny mpitandro filaminana tokony ho tamin’ny 09 ora maraina. Vao mainka anefa nandoro kodirana ary nitoraka vato ny mpianatra tao an-toerana. Nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso avy hatrany ny zandary ka niparitarika ny sasany tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana. Tetsy an-kilany, tsy nijanona tamin’ny fitakiany ny mpianatra fa nanohy hatrany. Zandary iray anefa tavela tao ambadiky ny vavahady, izay nitangoronan’ny mpianatra ka tsy afa-nihetsika tao. Tsy maintsy nampiasa ny fitaovana teny ampelatanany izy io ka nanao tifi-danitra indroa mba hanaparitahana ireo mpianatra nitazona azy. Vokatr’io, tovolahy mpianatra iray fantatra amin’ny anarana hoe John Elie Michel, 23 taona no maty rehefa voatifitra teo amin’ny tongony. Nohezahin’ireo namany nentina namonjy toeram-pitsaboana ny tenany fa be loatra ny ra very taminy ka nitarika ny fahafatesany. Ankoatr’izay, mpianatra roa sy zandary telo naratra ary efa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly ao an-toerana. Nandritra ny hetsika nataon’ny mpianatra tao an-toerana, maro ireo trano niharan’ny fandrobana. Voakasik’izany ny birao sy ny tranon’ny mpianatra. Lasibatra tamin’izany ny kidoro sy ny fitaovana fampiasan’ireo mpianatra. Noho io tranga io, mpianatra niisa sivy no voasambotra.
Governoran’Atsinanana, Rafidison Richard
“Tompon’antoka tamin’iny savorovoro iny ny filohan’ny oniversite”
Nilaza ny governora tao an-toerana fa tompon’andraikitra tamin’ny fisian’ny korotana notanterahan’ny mpianatra omaly filohan’ny oniversite. Ny vatsim-pianarana izay efa nomen’ny teo anivon’ny ministera azy ny volana jolay teo saingy mbola tsy nomeny ny mpianatra hatramin’izao fotoana. Nisakoroka arak’izany ny mpianatra ka niafara tamin’io fitokonana nahafatesana mpianatra iray . Marihina fa nivoaka ny hopitaly io omaly io ihany tamin’ny 3 ora tolak’andro ny vata-mangatsiakan’ilay namoy ny ainy. Noraisin’ny tompon’andraikitra ao an-toerana kosa ny fikarakarana ny razana sy ireo mpianatra mbola manaraka fitsaboana.
Fiofanana eo anivon’ny MaTSF: hitadiavana famatsiam-bola ny fiovan’ny toetr’andro 21/09/2021